Fikarohana momba ny firaisana Nai Leng dia niaina ny fanandramana nahafaty sy nateraka indray: tantaram-piainan'i Nai Leng | Chaokhun Rajsuthajarn (Choate) - Fikarohana Reincarnation
From: Ireo trangan-javatra momba ny fitondran-tenan'ny vatana, ny Boky IV, Thailand ary Birmania
Ity tranga ity dia mahavariana fa i Nai Leng, izay mpitsabo medikaly malala, dia afaka niaina tamim-pahavitrihana ny fahafatesany sy ny fahaterahany tao anatin'ny vatan'ny zazakely. Raha marina io kaonty io, dia manome fahatakarana mahavariana momba ny zava-mitranga amin'ny iray amin'ireo fanahiana be tratran'ny fisehoan-javatra eo amin'ny fiainana izay atrehintsika isika, izany hoe ny fahafatesantsika.
Ny fiainan'i Nai Leng sy ny rahavaviny Nang Rien
Nail Leng dia teraka tao 1863, tanàna kely any Ban Kraton, akaikin'ny tanàna Surin, any Thailand. Eo akaikin'ny sisin-tanin'i Kambodziana io faritra io ary misy Kambojiana mipetraka any amin'ny faritra, izay miteny ny fiteny Kambojiana izay antsoina hoe Khmer.
Nai Leng no lahimatoan'ny ankizy 7. Wa Sawa ny rainy ary Ma Chama reniny, na dia nantsoina tamin'ny anaram-bosony aza izy, Ee Mah.
Nai Leng sy ny Rahavaviny Vavolombelona teraka tamin'ny lalana iray
Nai Leng dia akaiky ny anabaviny, Nang Rien, izay taona iray latsaka noho izy. Raha vao 15 taona izy dia nanana traikefa tsy mahazatra i Nai Leng. Izy sy Nang Rien dia niasa tany an-tsaha ary nandeha an-tongotra rehefa nahita vehivavy iray teny an-dalana izay vao avy namonjy zazakely. Nanandrana nitondra ny vadiny tany an-tranon'ny reniny ny vadin'ilay vehivavy, saingy tsy nanao izany tamin'ny fotoana. Nijanona niaraka tamin'ny zanany vao teraka ilay vehivavy alohan'ny nanohizan'izy ireo ny diany. Ny fahitana dia nahatonga fahatsapana mahery vaika tao Nai Leng.
Nai Leng Nanao Monastary ary Mianatra Mamaky Kambojiana na Khmer
Raha vao 16 taona izy, dia niditra tao amin'ny monastera bodista i Nai Leng, izay ahitana ny andian-tsoratra bodista any Khmer. Na dia Thai aza ny tenindrazan'i Nai Leng, dia nianatra namaky ny soratra masina nosoratany tao Khmer izy. Tsy zavatra mora izany, satria tsy mitovy amin'ny tarehintsoratra Thai ny tarehintsik'ireo alfabeta Khmer. Choate dia nanjary nalaza ka nampianatra moanina hafa momba ny famakiana soratra masina Khmer izy tamin'ny farany. Ankoatra ny fandalinana ireo lahatsoratra Bodista, dia fanatanterahana ny moanina ny fanelanelanana.
Nai Leng ho any Laotian
Raha vao 25 taona izy dia nanapa-kevitra ny handao ny monastera i Nai Leng mba ho lasa mpamboly. Ankoatra ny fambolena voajanahary, Nai Leng dia nanao vola tamin'ny varotra varotra. Nandeha an-tongotra izy ary nandeha nitsidika an'i Laos matetika, hany ka nanjary nalemy tany Laotian izy. Nanambady izy ary nanan-janaka vavy telo, izay ny anarany dia Pa, Poh ary Pi. Na dia tsy moanina intsony aza izy, dia mbola Bodista feno fitiavan-tena ihany i Nail Leng ary nisaintsaina isaky ny alina. (1)
Nang Rien raha vao teraka
Nang Rien, zandriny vavy Nai Leng, nanambady farany ary nanana ankizy 3. Rehefa 45 taona izy dia bevohoka indray. Ny taona dia 1908. Nandritra io fitondrana vohoka io, raha nifanaraka tamin'ny vohoka teo aloha, dia lasa tena ara-panahy i Nang Rien ary nanapa-kevitra ny ho tonga Buddhist nun. Nohosorany ny volony, nitafy akanjo fotsy ary nifindra tao amin'ny monastera Wat Takien, izay 9 kilaometatra na kilometatra 15 avy ao Ban Kraton, tanàna izay nonenan'i Nang Rien sy Nai Leng. (2)
Nai Leng dia mampisy aretina, maty ary vovoka maro toy ny Choate
Raha i Nang Rien no tao amin'ny monastera, talohan'ny niverenany hody ny zaza vao teraka, dia namolavola tazo ny anadahiny Nai Leng. Nang Rien niverina tany Ban Kraton nandritra ny aretin'ny anadahiny, ary tonga tany an-trano izy, ary namonjy ny zanany tamin'ny oktobra 12, 1908, izay nantsoina hoe Chaokhun Rajsuthajarn, na dia fantatry ny fianakaviany aza ny anarany, Choate. Narary nandritra ny andro 6 i Nai Leng talohan'ny nahafatesany tamin'ny 13 tamin'ny 1908 tamin'ny 45 tamin'ny taona 3. Noho izany, i Choate dia teraka indray andro talohan'ny nahafatesan'i Nai Leng. (XNUMX)
Choate dia natokana ho lasa moka malaza any Thailand ary manoloana ny fiafaran'ny fiainany, dia nanoratra autobiographie izy, izay navoaka rehefa ChoNu dia 61 taona tamin'ny taona 1969. Ao amin'io boky io dia manazava i Choate fa fony izy mbola velona teo aloha dia izy no Nai Leng ary nahatsiaro saina izy nandritra ny fahafatesan'i Nai Leng sy ny fahaterahana indray tamin'ny naha Choate ny zaza.
Fiverenan'ny fihaviana, Fiainana Paralèla, Soul Twins, Lozam-pifamoivoizana na tranga miaraka amin'ny daty tsy misy fiafarana: Mandritra ny fotoana fohy
Ny mpamaky dia mety hanipika fa tsy azo atao izany, satria Teraka i Nen Leng, andro iray talohan'ny nahafatesan'i Nai Leng, saingy io trangan'ny fanahy io dia mitoetra mihoatra ny vatana iray amin'ny fotoana iray dia voamarika amin'ny tranga maro momba ny siansa momba ny vatana. Ian Stevenson dia nanondro azy ireo ho toy ny tranga misy "daty tsy fanao", izay miresaka momba ny andohalambon'ny fiainana. Miantso ity fisehoan-javatra ity ho "fizahana ny fisoronana" aho, satria ny fanahy dia afaka mizara ny heriny ho lasa vatana iray. Ny teny hafa ampiasaina amin'io trangan-javatra io dia ahitana ny fiainam-paritra, ny fanahin'olon-droa na ny lelafo roa. Amin'ity tranga ity, ny fanahin'i Nai Leng dia nampihetsi-po ny vatan'i Nai Leng sy ny vatan-dehilahy Choate nandritra ny fe-potoana naharitra iray andro. Raha te hijery ireo tranga tahaka izao dia mandehana any: Ny fihenam-bidy
Ny traikefa nahafatesan'i Nai Leng tamin'ny fijerena lavitra
Andeha isika handinika ny kaontin'i Choate hahafantatra ny zava-nitranga nandritra ny fahafatesan'i Nai Leng sy ny fahaterahany indray tamin'ny Choate. Ao anatin'ity fitantaràna ity, i Chaote dia mamaritra ny fomba ahafahany mijery televiziona ny hetsika ataon'ilay anabaviny, Nang Rien, tao amin'ny tempoly izay misy azy, izay 9 kilaometatra lavitra ny tranon'i Nai Leng. Ity fahafahana hitory amin'ny haino aman-jery amin'ny televiziona lavitra izany dia atao hoe: Remote Viewing
Andeha isika hiverina amin'ny fotoana nandraisan'i Nang Rien ny volana faha-7 nahabevohoka azy, manodidina ny fotoana naha-masera bodista azy ary nifindra tany amin'ny monasiterany izy, izay 2 volana talohan'ny nodiany hiteraka sy 2 volana talohan'ny nahafatesan'i Nai Leng. Ity fitantarana manaraka ity dia avy amin'ny tantaram-piainan'i Choate, rehefa mahatadidy ny fiafaran'ny fiainany ho Nai Leng izy. Ny tranony Nai Leng ny volana aogositra 1908.
Nai Leng fanandramana miala amin'ny aretina
"Tamin'ny taona 1908, fony izaho Nai Leng dia 45 taona, ary efa nanana ankizy 3, Nang Rien dia tao amin'ny volana 7 volana naha bevohoka azy. Io no volana 8 tamin'io taona io. Izaho, Nai Leng, dia efa narary nandritra ny volana maromaro. Nandritra io fotoana io, dia nifankahita indray tamin'ny nofinofiny io rahalahy sy anabavy [Nai Leng sy Nang Rien] io. Ao amin'ny sehatry ny Nang Rien, hatramin'izay nahaterahany, dia nanana finoana mahery vaika tamin'ny Bodisma izy, indrindra fa mikasika ny fisaintsainana .... Indrindra, izy dia te-ho lasa bhikkhuni [a nun]. Noho izany, ny alin'ny fandevenana bodista tamin'io taona io, mbola bevohoka foana, nandao ny reniny sy ny vadiny ho an'ny monastera ...
Raha mbola teo am-pivavahana sy nisaintsaina i Nang Rien, izaho, Nai Leng dia narary tany an-trano. Na izany aza, tsapako ho toy ny hoe fantatro tsara ny fihetsik'i Nang Rien amin'ny zavatra ... Nangataka sy nisaintsaina i Nang Rien nandritra ny fotoana manontolo, tsy nahalala izany fotsiny aho fa nahita izany.
Raha ny fahitako azy dia teo foana aho… teo amin'ny 2 metatra teo aoriany. Tsy niresaka taminy mihitsy aho…. Toa tsy nivadika mihitsy ny masoko. Nibanjina azy fotsiny aho, ka hadinoko hatrany ny manamarika ny fisiako manokana, izany hoe ny fomba nahafahako niara-nifindra taminy ... Na dia nivavaka teo anoloan'ny sarin'i Bouddha aza aho dia mbola nijery ihany avy any aoriana izy. Avy eo nampirehitra ny labozia lehibe sy hazo jos telo [hazo ditin-kazo manitra]… Rehefa avy nandrehitra ny labozia rehetra dia nanomboka nivavaka indray izy ... Avy eo nametrahany ny tanany, nakimpiny ny masony, ary nanohy nivavaka mandra-pahatongan'ny joss rehetra. ary may ny labozia… ”
Nai Leng dia nanafaka ny zanany lahy, Choate-Nai Leng niorenany
“Fantatro sy hitako ny hetsika nataony nandritra izay fotoana izay. Saingy, tamin'ny andro niverenany [avy any amin'ny Wat Kratom], somary nisavoritaka aho ary tsy nahatadidy na inona na inona… Dia tsaroako avy eo fa narary aho. Indray andro, nisy olona 4 tao an-trano – havana vehivavy 3 sy ny vadin'i Nai Leng. Nanokatra ny masoko aho ary nahita ary nandre izay noresahin'izy ireo: 'Tamin'ny 9 alina alina dia nanolotra zazalahy kely mahafatifaty i Nan Rien'… Nieritreritra aho fa raha normal aho dia handeha hitsidika azy ihany koa . Saingy indro aho, narary marary. Ny hany azoko natao dia ny nihaino ny resak'izy ireo fotsiny.
Tamin'io fotoana io dia nahatsapa fangirifiriana aho, ary naniry ny hiova avy amin'ny toerana migadra ho any amin'ny iray amin'ireo marary kokoa. Satria hitany fa sahirana izy ireo nifampiresaka, tsy nangataka ny fanampian'izy ireo aho. Ankoatra izany dia tsy naheno ny feoko aho. Noho izany dia niezaka ny nitodika tany amin'ny rindrina aho. Nahomby aho saingy tsy afaka nitazona ny fifandanjako tamin'io toerana io. Mbola teo am-pandriana indray aho. Nolazaiko ny hafaliako mandritra ny fotoana fohy miaraka amin'io fampaherezana io. "(4)
Nai Leng's ivelan'ny traikefa amin'ny vatany, ny fahafatesany ary ny fahatsiarovany ny hetsika raha ivelan'ny vatany
“Mieritreritra aho fa mety ho tsara kokoa raha matory, avy eo nisento lalina imbetsaka ary nanakimpy ny masoko. Amin'izao fotoana izao dia nahatsiaro ho toy ny niverina tamin'ny ara-dalàna indray aho. Nahatsiaro ho matanjaka kokoa aho ary afaka nifindra haingana kokoa tamin'ny toerana hafa. Maizina ny vatako, toy ny hoe tsy milanja. Faly be aho fa nirohotra niditra tamin'ny resaky ny havako. Saingy tsy nisy nahatsikaritra ahy. Noraisiko ny tanan'ity iray ity ary nosarihako ny sandrin'io, hisarika ny sain'izy ireo. Mbola tsy nisy nanao na inona na inona.
Tonga ny fotoana hanomanana sakafo hafa amin'ny andro. Ny havako dia vonona ny hiala. Ny iray tamin'izy ireo dia nahatsapa ny tongotr'i Nai Leng. Taorian'izay aho dia nanandrana naka ny tanany sy ny sorony. Nikiakiaka aho hoe: 'Tonga aho. Tsy marary intsony aho. Efa tafaverina aho. Aza matahotra na matahotra. Aza manakorontana, marina aho. ' Na izany aza, tsy azoko natao ny azon'izy ireo.
Nitomany sy nikiakiaka izy ireo. Ny sasany tamin'izy ireo dia nandeha nanambara tamin'ireo havany sy namany hafa tany amin'ny manodidina. Ity farany dia mandatsaka ao an-trano. "(5)
Nai Leng niaina ny fahatsapan'ny fanahy
"Tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa aho raha tsy misy eny rehetra eny: Afaka mahita olona avy amin'ny 2 na 3 hafa ihany aho. Ankoatra izany, afaka ny ho any aho mba handraisako azy rehetra miaraka amin'ny fotoana iray ihany. Afaka naheno ny feon'izy ireo ihany koa aho ary nahita mazava tsara.
Toa lavitra be ny toerana lavitra, satria afaka nandeha haingana be avy any amin'ny toerana aho. Afaka tonga teo aho mba hihaino na hijery. Toa tsy nisy ny sakana [ho an'ny hetsika na ny fahitana] ary ny rehetra.
Tamin'izay fotoana izay dia nieritreritra aho hoe: 'Izaho no lohan'ny tafika; Tena tsara aho. Izaho no tompon'ny fombafomba izay manana ny teny farany amin'ny raharaha rehetra. Manana fahefana lehibe aho ka tsy misy mahasakana azy na hanindrona azy io. ' Nahafa-po ahy anefa ny zavatra nataon'ireo havako hatramin'izao. Tena feno fankasitrahana aho fa tsy mahatsiaro hanoanana na mangetaheta. Nentina be aho tamin'ity toe-javatra mampihetsi-po ity izay nanadinoiko hatory sy hihinana. Tsy nahatsiaro ho reraka mihitsy koa aho. "(6)
Taorian'ny nahafatesan'i Nai Leng ny fandevenana azy manokana
“Nandritra ny lanonana fandevenana manontolo (fantatro taty aoriana fa 3 andro io) dia somary nisondrotra aho - tamin'ny halavan'ny olona salantsalany – ambonin'ireo hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha nipetraka ny hafa dia nahatsapa aho fa nijoro; raha nijoro izy ireo na nandeha, dia nahatsapa aho fa toy ny mijoro na mandeha amin'ny zavatra izay avo kokoa noho ny azy ny haavony. Raha teny an-dalana ho any amin'ny fandoroana faty ny filaharam-pandevenana, nipetraka teo amin'ny fiolanan'ilay sarety aho, ny faritra avo indrindra amin'ny sarety. Io sarety io, azo antoka, tsy nanana fiolahana; ny fahatsapako fotsiny fa teo amin'io ambaratonga io aho. [Ity dia manondro zana-kazo miolaka izay azo apetaka amin'ny sarety hitazomana fitaovana, toy ny sakaosy vary izay nobataina tao anatiny, fa nesorina kosa nandritra ny fitondrana vatana mangatsiaka tao anaty vatam-paty.]
Taorian'ny fandoroana faty dia nangonin'ny havako ny razana. Avy eo izy ireo dia nanasa moanina ho an'ny 'lanonana taolam-paty', izay dingana farany tamin'ny fandevenana. Tokony ho tamin'ny 8 ora alina vao vita ny hiran'ny moanina. Ny fiahiako ny fandraisana ireo vahiny dia somary nihena tamin'izay. Ireo vehivavy tonga nanampy dia lasa natory tao an-trano, fa ny lehilahy kosa natory tao anaty vondrona mikorontana tao amin'ny trano namboarina indrindra ho an'ny lanonana.
Teo amin'ny tokonam-baravaran'ity trano ity dia nisy zokiolona 3 nipetraka nanodidina ny fatana. Na mitsako siligaoma Thai na mifoka sigara izy ireo. Izy ireo dia azo heverina ho mpiambina amin'ny alina. Tampoka teo dia tonga tao an-tsaiko ny eritreritra an'i Nang Rien. 'Reko fa tera-jaza izy. Mbola tsy namangy azy aho, satria sahirana be nandray vahiny. Malalaka aho izao. '”(7)
Nai Leng nitsidika an'i Nang Rein, izay mahita azy ho toy ny Ghost
"Tamin'io fotoana io, teo amin'ny toerana nipetrahan'ireo moanina tao amin'ny toerana nisy ny fandoroana ny fandoroana. Miaraka amin'ilay voalaza ao an-tsaiko, dia nitodika tany amin'ny trano Nang Rien aho, izay tokony ho 200 metatra lavitra any andrefana. Vetivety dia nanapa-kevitra ny hifindra toerana aho raha teo.
Ilay zaza, araka ny nolazain'ny havako, dia tena mahafatifaty sy mahafinaritra. Nihevitra ny tenako aho hoe: Ahoana no ahafahako manana fahafahana hikasika azy sy hanome azy oroka amin'ny foko? Nangotra teo an-tanany havanana tamin'ilay zaza i Nang Rien. Tsy ela dia nanokatra ny masony izy, nahita ahy, ary nilaza hoe: 'Ry rahalahy malalako, efa lasa lavitra izao tontolo izao ianao. Miangavy anao mankany amin'ilay toerana izay hanolotra anao fahasambarana. Aza miseho intsony amin'ireo rahalahy sy anabavinao, ary aza mieritreritra azy ireo. '
Io no hany fotoana nahitan'ny olona ahy ary niresaka tamiko izy. Nahatsiaro ho nahatsiravina aho ka nandeha sy niafina. Niantehitra tamin'ny rindrina aho teo anoloan'ny efitranony, nitodika nianavaratra. "(8)
Ny firazanana ao amin'ny vatana: ny vatan'ny zaza Nai Leng Enters Choate
"Rehefa afaka kelikely dia nieritreritra aho fa natory indray izy, dia nivoaka aho mba hahitana ilay zaza. Nanokatra ny masony indray izy ary niteny tamiko toy izany koa. Niverina nafenina aho. Nolazaiko tamin'ny tenako fa tonga ny fotoana handraisako fanapahan-kevitra indray mandeha ary ho an'ny rehetra. Nalahelo aho teo amin'ny fihetseham-po anankiroa. Na dia te hijanona aza aho dia tokony handeha; tsy maintsy mandeha aho. Mialohan'ny hialako anefa, dia te hijery tsara ny ankizy aho. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy sahy nanatona ahy aho fa tsy manala tsiny ahy indray. Noho izany dia nibata ny lohako ihany aho. Rehefa avy nijery tsara aho dia nanomboka nandeha indray.
Raha vantany vao nivadika aho, dia nanomboka nitsambikina toy ny tampony ny vatako. Tsy afaka niverina indray aho. Niezaka nanarona ny lohako sy ny tarehiko ary ny sofiko tamin'ny tanako aho talohan'ny nianjera tsy nahatsiaro tena. Tamin'io fotoana io no niheverako fa maty aho.
Tsy fantatro hoe hafiriana talohan'ny nahatsiarovako izany. Nanontany tena aho hoe taiza no nisy ahy. Ny fifantohana sy ny fahatsiarovana dia nilaza tamiko fa tsy ela talohako dia izaho no Nai Leng. Tsapako fa feno hery aho. Nahatsiaro ny lasa rehetra aho, nanontany tena aho hoe nahoana aho no tsy nanampy ahy. Nahatsiaro ho kivy aho. "(9)
Amin'ny maha-zazakely azy, dia manaiky ny havany amin'ny fiainany ny Choate
"Taoriana kelin'izay dia faly aho fa afaka mitodika any amin'ny vavoniko. Vao mainka aho niaiky fa nahita olona rehetra nahita ahy. Tsaroako ny anarany. Nanofahofa tanana aho ary nanandrana niantso azy ireo. Na izany aza, nivoaka ny feo tsara ara-barotra, ara-dalàna ho an'ny zazakely. Nisy olona nahatsikaritra ny fihetsikao ary nanohana ahy. Faly be aho ary nihomehy tamin-kafaliana. Nandritra io vanim-potoana io, dia nisy fotoana nahitam-bokatsoa kokoa noho ny alahelo. "
Choate dia mianatra miteny ary miantso ny havany amin'ny fiainany taloha
"Tonga indray ny fotoana iray nianarako nandeha sy niresaka. Indray andro rehefa tonga ny renibeko, fa tsy nampiantso azy izany, dia nampiasa ilay teny hoe reny aho. Notarihin'ny olom-pantatro taloha aho tamin'ny fahatsiarovako manokana. "(11)
Maomai, renibe, Ma Chama, dia gaga fa nantsoin'i Choate ny reniny ary nanontany izy hoe: "Ary inona no anaranao?"
Avy eo dia namaly i Choate hoe: "'Leng." Ao amin'ny autobiography, Choate manohy: "Nanontany tena aho hoe maninona no tsy mahafantatra ahy ry zareo. Izaho dia Nai Leng ary avy eo. "(12)
"Nangataka tampoka i Nang Rien hoe: 'Tsy mahagaga. Nahita ny rahalahy Leng aho indraindray nandritra ny vanim-potoanan'ny postpartum. Tsy maintsy nateraka indray izy. ' Nanontany izy avy eo hoe: "Raha izany, anaka, inona indray ny anaranao? Ary ahoana ny amin'ny vadinao? Taiza ianao no nipetraka? ' Ary dia toy izany hatrany. Nanome valiny marina momba ireo fanontaniana rehetra aho. Nomeny avokoa ny famintinana fa nodimandry i Nai Leng. "(13)
Andeha hodinihintsika ny andalan-dahatsoratra ireo. Choate dia teraka tamin'ny Oktobra 12, 1908. Rehefa nianatra niteny izy, na dia nanazava ny reniny sy ny dadatoany aza ny reniny, dia mbola nanizingizina izy fa hiantso ireo dadany sy anabaviny ho toy ny rahalahiny sy anabaviny, toy ny hoe mbola any Nai Leng izy. Toy izany koa, niantso ny renibeny izy, Ma Chama, "reny". Izy no renin'i Nai Leng.
Ny zanakavavin'i Nai Leng dia nino fa ny Choate no fampisavorovoroana ny Rainy
Ny zanakavavin'i Nai Leng, Pa, dia 24 taona fony izy maty. Rehefa nifidy 4 taona i Choate, dia nahafantatra azy izy ary niteny hoe: "Izaho no rainao" ary niantso azy tamin'ny anaram-bosasany izy. Tamin'ny fanehoan-kevitra voalohan'i Choate dia nanamavo an'i Pa, saingy rehefa nandeha ny fotoana, dia resy lahatra izy fa ny Choate no nateraka indray.
Nolazain'i Poh, zanakavavin'i Nai Leng faharoa, fa fony ny zazalahy Choate dia niresaka momba ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'ny rainy izay tsy nahalalan'i Choate. Nilaza izy fa ny Choate amin'ny maha-zaza dia manavaka ny olona fantatry ny rainy amin'ny fahitana ary niantso azy ireo tamin'ny anarany.
Pi, zanakavavin'i Nai Leng, dia nahatsiaro fa tezitra i Choate raha ny zanakavavin'i Nai Leng, izany hoe Pa, Poh sy Pi, dia tsy manondro azy ho "ray".
Ny anabavin'i Nai Leng, Nem, dia nilaza fa i Choate dia nahafantatra azy tamin'ny anarany raha vao afaka niteny izy. Amin'ny maha-zaza azy, Choate dia nahafantatra ny vadin'i Nai Leng ary niantso azy tamin'ny anarany ary izy koa dia nantsoina hoe olona hafa fantatr'i Nai Leng. (14)
Tahaka ny Dalai Lama, Choate dia mamaritra ny fananany fiainana taloha
Amin'ny maha-zaza azy, Choate dia mety hanavaka ny zavatra ao amin'i Nai Leng amin'ny zavatra izay an'ny hafa. Ity fahafaha-mamaritra ny fananana fiainana taloha ity dia ampiasain'ny moanina boddianina mba hamantarana ny fiverenan'ny vovoka indray ny Dalia Lama. (15)
Choate dia manana fahatsiarovana ny fiainan'ny vehivavy iray izay nanome ny fahaterahana teo amin'ny lalana
Amin'ny maha-zatovo azy, Choate dia nahatsiaro ny zava-nitranga tamin'ny fotoana niainan'i Nai Leng tamin'ny 15 taona, izay nahitan'i Nai Leng ilay vehivavy teraka teny an-dalana. Ny renin'i Choate, Nang Rien, izay niaraka tamin'i Nai Leng rehefa nitranga izany, dia nanamafy ilay tranga. Ao amin'ny autobiography ao Choate, izy dia mamaritra ny fahatsiarovana.
"Nai Leng aho tamin'ny faha-15 taonako. Hariva teo am-piandohan'ny taom-pambolena. Rehefa vita ny asan'ny tontolo andro dia nandeha an-tongotra toy ny mahazatra izahay sy Nang Rien rahavaviko. Teny an-dàlana hiverina izahay dia nahita vehivavy iray miala sasatra rehefa avy niteraka zaza teny an-dalana.
Ny lehilahy dia teratany Ban Nua, fa ny vadiny dia avy any Ban Tai. Ny vadiny dia naniry mafy ny hamonjy ny zanany sy ny toeran'ny reniny. Rehefa nanakaiky ny fotoana hiterahany dia nangataka mafy tamin'ny vadiny izy mba hitondra azy any. Nanaiky ihany ny vadiny tamin'ny farany, saingy raha tsy efa antomotra izy vao hiteraka ny zanany. Tamin'ny fotoana nahatongavan'ilay sarety teny amin'ilay toerana voaresaka dia efa nanomboka ny asany. Nosakanan'ny vadiny ny sarety, novahany ny omby ary nanamboatra toerana ipetrahan'ny vadiny izy. Ity dia zavatra mbola tsy hitako mihitsy. Hafahafa tamiko izany, ary vokatr'izany dia nanaitra ahy tanteraka izany. ” (16)
Na dia manana izany fahatsiarovana izany aza i Choate hatramin'ny nifindrany tamin'i Nai Leng tamin'ny lasa, dia tsy azony hoe aiza ny nahaterahan'io zaza io. Indray andro dia niandry omby izy izay nalainy mba hihinan-kanina. Tao amin'ny toerana iray manokana dia nanana ny traikefan'i Déjà vu izy. Tsapany fa teo akaikin'ilay toerana nahaterahan'ilay vehivavy teny an-dalana ilay vehivavy, dia nahita maso izy nandritra ny androm-piainany Nai Leng. Choate dia mitantara ny sehatra manaraka.
Ny traikefa Choat Déjà Vu sy ny Memory Geographic
"Raha vao tonga tao an-trano aho ny hariva, dia nanontaniako ny reniko raha nisy vehivavy nanolotra zazakely teo amin'io toerana io. Hoy izy hoe: 'Eny, fa izany no nitranga fony aho 14 taona ary niverina tamin'ny saha niaraka tamin'ny zandriko lahy 15 taona.' Izaho no rahalahiny, izay tonga zanaky ny zandriny faralahy. "(17)
Eo am-piandrasana ny fanentanana ny fahatsiarovana ny fiainan'ny fiainam-piainana taloha: Fahatsiarovana jeografika
Xenoglossy: Azonao atao ny mahatakatra ny Khmer tsy an-kiato
Tamin'ny taona 16, Choate dia lasa monastera bodista ary niditra tao amin'ny monastera iray, namerina ny lamin 'ny fiainan'i Nai Leng. Ity monastera ity dia nanana soratra masina bodista izay nosoratana tamin'ny teny Khmer, na Kambodziana. Choats dia nahamarika ireo moanina namaky ireo soratra Khmer ireo ary na dia nampianarina tany amin'ny teny Thai ihany aza izy, naka ny sora-tanana Khmer sasantsasany tao amin'ny efitranony izy mba hahitana raha afaka mamolavola azy ireo izy. Tsarovy fa ireo karazana abidy Khmer dia samy hafa amin'ny an'ny fiteny Thai.
Hitan'i Choate fa tsy afaka namaky ny sora-tanana Khmer izy tamin'ny voalohany, fa tamin'ny fahatelo fahatelo dia azony ny fahatakarana azy ireo. Ao amin'ny autobiography, Choate dia mamaritra ity traikefa ity.
"Ilay boky [Khmer voasoratra] dia nandao ny 10. Nandalo tao anatin'ny adiny iray aho na izany. Matahotra aho fa tsy mety ny famakiana voalohany, nanomboka indray aho. Ity famakiana ity koa dia naka ahy adiny iray. Tsy mbola nahafa-po ahy izany, ka dia namaky izany ho fanintelony aho. Faly be aho ary nahagaga ahy fa afaka namaky izany aho nefa tsy nisy lesona teo aloha. Maro ireo olona no nanao ezaka goavana tamin'ity taona ity tamin'ny taona lasa, nefa vitsy ihany no nahomby. Taty aoriana dia nanomboka nanoratra aho ary namaky Khmer ... Hatramin'izay dia azoko vakina ny asa kanonika rehetra, na amin'ny Thai na Khmer izany. Ny antony dia tsotra: efa nieritreritra tsara aho hatramin'izay niainako fony i Leng. Azo antoka fa hadino ny ampahany aminy, saingy voajanahary fotsiny izany. "(18)
Ity fahafahana mahazo ny fiteny izay tsy mbola nianatra ity dia antsoina hoe: Xenoglossy
Xenoglossy: Ny fahafaha-miteny dia afaka mahatakatra ny Laotian
Misy tranga hafa iray mitranga amin'ny xenoglossy. Raha moanin-jaza 19 taona izy, dia nahamarika i Choate fa ireo mponina manodidina ny monastera dia niteny Laosianina. Choat nanatona ireo mponina ireo ary nahita fa afaka miresaka tsara aminy izy, na dia tsy nampianarina ny Laotian aza izy. Ho an'ity fahafaha-manao ity, dia nisarika ny fahalalan'i Loatian ny fahalalany taloha momba an'i Loatian, izay nalain'i Nai Leng. (19)
Choate dia nanjary Abbot na Head of Monastery
Raha nihalehibe ny Choate, dia tsy nitsahatra ny fahatsiarovany ny fiainany toa an'i Nai Leng, izay nanintona ny fanoloran-tenany ho amin'ny fisaintsainana mandritra ny androm-piainana roa. Choate dia maty tamin'ny 1976 tamin'ny taona 68 ho anisan'ny moanina sy amboambe manan-kaja indrindra.
Xenoglossy: Ity tranga ity dia mampiseho izay nantsoin'i Ian Stevenson, MD ho xenoglossy mamaly, izay ahafahan'ny olona iray miresaka amin'ny fiteny iray izay tsy nianarana tamin'ny fomba mahazatra. Mifanohitra amin'izany kosa, i Stevenson dia nantsoina hoe fahaizana mitonona na miteny fiteny tsy dia nandia fianarana nefa tsy nahay namaly na niresaka tamin'io fiteny io hoe "recenative xenoglossy."
Amin'ity tranga ity, Choate, izay nampianarina ny fiteny Thai, dia afaka nifampiresaka tamin'ny olona avy ao Laos amin'ny fiteny Laosianina. Ho fanampin'izany, Choate dia afaka namaky ny soratra Bodista izay nosoratana tamin'ny fiteny Kambojiana na Khmer, na dia tsy nampianarina na Khmer mihitsy aza izy. Ireo fiteny roa ireo dia navoakan'i Nai Leng sy Choate izay nanatsara ny fahafaha-manaon'ny fiainana niainan'i Laotian sy Khmer.
Ny fihenam-bidy: Choat dia teraka tamin'ny 12 tamin'ny 1908 tamin'ny Oktobra, raha maty i Nai Leng ny ampitson'io tamin'ny 13 1908 tamin'ny XNUMX, izay midika hoe ny fanahin'i Nai Leng no namorona ny vatan'ny Nai Leng sy ny Choat zazakely nandritra ny fotoana iray iray andro.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ity tranga ity dia mampiseho fa afaka mamindra fo ao anatin'ny fianakaviana iray ihany ny olona, ​​toa an'i Nai Leng izay niorina indray ary teraka tamin'ny rahavaviny, Nai Rien.
Fanandramana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fahafatesana sy fanahy: Nai Leng dia nahita fijery lavitra tamin'ny fandinihana an'i Nai Rien fony izy tao amin'ny tempoly. Izy koa dia niaina tamim-pahavitrihana ny fahafatesany sy ny fahatsiarovan-tena ny fanahy. Nanatrika ny fandevenana azy manokana izy ary nanaraka ny vatany rehefa nentina tany amin'ny tempoly ho an'ny fandoroana ary nanatrika ny fotoam-pandevenana izy taorian'ny fandevenana izay nahitàny ny havany izay nivory ho amin'ny fandraisana. Nai Leng dia nahatsapa ihany koa ny fahaterahana indray tamin'ny Choate ary inona no eritreretiny ho zazakely tsy mahomby.
1. Stevenson, Ian: Fomba amin'ny karazana gay vaovao, Boky IV, Roambinifolo roambinifolo ao Thailand sy Burma, University Press of Virginia, Charlottesville, 1983, pejy 171-174
2. ibid, pejy 174-175
4. ibid, pejy 174-176
5. ibid, pejy 175-176
7. ibid, pejy 176-177
10. ibid, pejy 177-178
14. ibid, pejy 184-185
16. ibid, pejy 180-181
17. ibid, pejy 181-182
18. ibid, pejy 183-184